Taona 2016 : misy 29 ny Afrikanina mpanefoefo eran-tany, vehivavy ny roa | NewsMada
Taona 2016 : misy 29 ny Afrikanina mpanefoefo eran-tany, vehivavy ny roa
Navoakan’ny gazety boky amerikanina Forbes ny 1 marsa teo ny anaran’ireo olona 100 manankarena indrindra eto ambonin’ny tany (Manana renivola amina dolara amerikanina). Misongadina ny Afrikanina, saingy tsy mifanaraka amin’izany ny fari-piainan’ny mponina ankapobeny.
Amin’ity taona 2016 ity, nahita mpanefoefo miisa 1.810 ny Forbes, somary nihena kely ny isan’izy ireo raha ampitahaina tamin’ny taona 2015, nisy 1.826. Tompon’ny laharana voalohany ihany ilay Amerikanina, Bill Gates, tombanana manana 75 miliara dolara.
Misy 29 ny Afrikanina hitan’ny Forbes amin’ireo 100 mpanakarembe ireo. Voalohany, ilay teratany nizerianina, Aliko Dangote, tompon’ny orinasa mpanao simenitra Dangote Ciment, manana 15,4 miliara dolara. Laharana voalohany manerana an’i Afrika ny orinasany, ary tamin’ny 2015, nanokatra orinasa vaovao izy, any Tanzania, Cameroun, Etiopia ary Zambia. Vao tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity, nandalo eto Madagasikara ny iraka avy amin’io Groupe Dangote io, Serigne Mbacké, hijery izay azo atao.
Vehivavy kosa ny roa amin’ireo Afrikanina ireo, Isabel dos Santos, 42 taona, zanaky ny filoha Angola, Eduardo dos Santos, manana 3 miliara dolara. Renivola maro ny azy, mihodina amina orinasa isan-karazany : fitrandrahana solika, fifandraisan-davitra, banky, sns. Faharoa, Forolusho Alakija, teratany nizerianina, manana 1,6 miliara dolara avy amina fitrandrahana solika.
Lazaina fa anisan’ny antony lehibe nampihena ny isan’izy ireo ny vidin-tsolika latsaka ambany sy ny sandam-bola dolara nahazo aina. Voalohany hatramin’ny taona 2010, nihena 300 tapitrisa dolara ny renivola ankapobeny, araka ny salanisa, raha ampitahana tamin’ny taona 2015. Na izany aza, misongadina hatrany ny fitombon’ny elanelana eo amin’ny mpanankarena sy ny mahantra. Amin’izao fotoana izao, ny fitambaran’ny fananan’ireo 100 mpanefoefo ireo, mbola manantombo lavitra noho ny fitambaran’ny fananan’ny an-tsasaky ny mponina maneran-tany, araka ny kajy nataon’ny ONG britanika Oxfam.